#7 စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ချဉ်းကပ်မှု | Mycanvas
အကယ်၍သင်ဟာ Professional အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင်ဘာကိုဂရုစိုက်မလဲ? သေချားပါတယ် သင်ရဲ့ စိတ်နဲ့ခန္ဓာကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အတွက်လည်း ထိုနည်းတူဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်တာစားတာတွေဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက် အချိန်မှန်မှန်အိပ်ပြီး မနက်စာကိုလည်းမစားပဲမနေသင့်ပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်လုပ်ခြင်းကလည်း သင့်ကိုလန်းဆန်းစေပြီး ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးတစ်ယောက်ပြုလုပ်ရမယ့်အခန်းကဏ္ဍတွေအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိန်းညှိထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
[သင်မနှစ်သက်သူတွေအပေါ်မှာ “Love Power” ထားပါ]
“Love power” ဆိုတာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပြီးချစ်မြတ်နိုးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူ အကျွမ်းတဝင်ရင်းနှီးလို့မရတဲ့ သူတစ်ဦးနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့အခါ စိတ်ရှုပ်ဖူးပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် “Love Power” က အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းမှာ စိတ်၀င်စားစရာကောင်းသောအချက်များရှိသော်လည်း သင်ရဲ့အကောင်းမမြင်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုမဖျောက်နိုင်ပါကအဲ့ဒီ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုသင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ ထိုသူဆီမှာရှိတဲ့ သင်လေးစားရလောက်တဲ့အချက်တစ်ခုခုကိုရှာပါ။ Professional skills တွေကိုလေ့လာခြင်းထက် တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဟာ စီးပွား‌ရေးသမားတစ်ယောက်အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
စီးပွားရေးသမားတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ်မူတည်ပြီး အလုပ်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် သင်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာသင်နားလည်ပါသလား? အဖြေကတော့ လူတစ်ဦးအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အချို့လူများဟာ အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့အတူနာရီပေါင်းများစွာဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း အချို့ကတော့ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာ၀န်ကိုအချိန်တိုအတွင်းအလွန်အာရုံစိုက်ကြပါတယ်။ ဒီကွာခြားချက်တွေဟာ တာတိုအပြေးသမားနဲ့ တာဝေးအပြေးသမားများနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ အရင်ဆုံး သင့်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အရှိန်ကိုသိပါစေ။
သင့်ရဲ့ရွယ်တူချင်းတွေနဲ့ သင့်မြတ်အောင်နေဖို့ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါ စည်းတစ်ခုထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ၂ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ သိစိတ်ကဖြစ်စေ မသိစိတ်ကဖြစ်စေ သင်ဟာသင်ကိုယ်သင်သူတို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်နေမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သင့်ကိုစိတ်မပျော်ရွှင်စေတဲ့ မနာလိုတဲ့စိတ်၊ ညံ့ဖျင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ သင်ဟာအလုပ်ကိုအာရုံမစိုက်နိုင်ပဲ သူတို့နဲ့စကားပြောတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သူတို့နဲ့ပဲလိုက်လျောညီထွေနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်အနာဂတ်မှာရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တခြားသူတွေနဲ့လည်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။